१६ वर्षमा विहे : २ महिनादेखि श्रीमानको कु’टा’ई, डिभो’र्स माग्दा उ’ल्टै श्रीमानले श’रिर ज’लाईदि’ए ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/१६ वर्षमा विहे : २ महिनादेखि श्रीमानको कु’टा’ई, डिभो’र्स माग्दा उ’ल्टै श्रीमानले श’रिर ज’लाईदि’ए !
जनकपुरधाम : श्रीमान्को झैं’झ’ग’डा गर्ने बा’नीबाट दि’क्क भएर २१ वर्षीया आरती साहले अघिल्लो वर्ष फागुनमै त’ला’क मागिन्। मु’द्दा लिएर अ’दा’लत पनि गइन्। कोरोना महा’मा’रीका कारण लकडाउन भयो र मु’द्दा अघि बढ्न सकेन। तर, उनका श्रीमान् सञ्जीवकुमार साह एक्कासि कात्तिक २९ गते बिहान जानकीनगरस्थित डे’रामा आइपुगे।
तब आरतीको शरी’रमा ए’सि’ड छ्या’पेर भा’गे। ए’सि’डले आरतीको आ’धा शरीर ज’ल्यो। एउटा आँखा कामै न’लाग्ने भयो। मु’ख, हा’त र घाँ’टीमा ग’हि’रो घा’उ लाग्यो। उनलाई अहिले अ’स’ह्य पी’डा छ। औषधि, राम्रो उपचार र पौष्टिक खानपानको आवश्यकता छ। तर, आर्थिक वि’प’न्नताका कारण तीन वर्षकी छोरी रि’यासहित छा’क टा’र्नै धौ’धौ देखिएको छ।
‘त्यस बेला मैले त केही बुझ्नै सकिनँ, सोझै सडकतिर भा’गें’, आरतीले आफ्नो पी’डा रुँ’दै सुनाइन्, ‘छरछिमेकी र सडकमा भएकाहरूले मेरो ज’लि’रहेको लुगा र लुगासँगै ग’लि’रहेको शरी’रको मा’सु हेरे। तर, कसैले स’हयोग गरेनन्। आफैं एउटा टे’म्पो चा’लकलाई हा’रगु’हार गरेर टेम्पो च’ढी म जानकी हेल्थकेयर सेन्टर पुगें। तर, त्यहाँ त’त्काल उपचार गर्न मानेनन्।
पहिला पु’र्जी क’टाएर ल्याऊ भन्यो। मैले श’रीर जलि’रहेको पी’डा ख’प्न सकि’रहेकी थिइनँ। तर, हि’म्म’त न’हारी एक जनासँग मोबाइल मागेर बुवालाई फोन गरें। बुवा त्यहाँ आइपुगेपछि मात्रै मलाई उ’पचार कक्षमा लगे।’ उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगियो। तिलगंगा अस्पतालमा आँखाको श’ल्यक्रि’या गरियो। अन्य उपचार पनि काठमाडौंकै अस्पतालहरूमा भयो।
तीन महिनाभन्दा बढी उ’पचारपछि जनकपुर फर्किएकी आरतीलाई चि’कि’त्सकले निर’न्तर औ’षधो’पचारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। तर, ग’रि’बीले ग्र’स्त उनको प’रिवारले उपचारलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। ‘उनको उपचार, खानपान र रेखदेखमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर अहिले ऋ’णमा डु’बेको छु’, बुवा सुबोधले भने, ‘अहिले भाडाको घरमा दुई हजार रुपैयाँ छुट्टै तिरेर छोरी र नातिनीलाई राखेको छु।
त्यसमाथि खा’न’पिन र औषधि जो’ड्न साह्रै अ’प्ठ्या’रो भएको छ।’ प्रदेश २ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा आरतीलाई मधेस भवनमा बोलाएर स’म्मान गर्‍यो। तर, उनको उपचार वा जीव’नयापनका लागि कुनै सहयोग नगरेको सुबोधले बताए। ‘कहीँबाट कुनै सहयोग छैन। जसलाई छोरी दिएँ उनले यस्तो दु’र्द’शामा पुर्‍याए’, उनले भने, ‘अब यसको र सानो नातिनीको जीवन कसरी चल्छ थाहा छैन।’
१६ वर्षमै बिहे, दुई महिनादेखि कु’ट’पि’ट
कानुनले बाल विवाहलाई ब’न्देज लगाए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ की आरतीको १६ वर्षकै उमेरमा २०७३ सालमा धनुषाको देपुरा रूपैठा गाउँका सञ्जीवसँग बिहे भयो। परिवारले दुई लाख नगद, एक तोला सुन र घरजम गर्ने सबै सरसामान दा’इजो दियो। सुनचाँदी कारिगरको काम गर्ने सञ्जीवले ला”गू”औ”ष”ध र म”दि”रा से’वन गरी बिहेको दुई महिनादेखि आरतीलाई कु”टपि”ट गर्न थाले।
‘मैले ससुरालीमा न’र्क भो’गें। कु”टपि”टको त कुरै नगर्नुस् कुनै यस्तो द”शा छैन जुन मैले भो’गिनँ’, आरतीले भनिन्, ‘म र मेरी छोरीलाई खानलाउन गा’ह्रो भएपछि गाउँमै केही काम गर्न था’लें। तर, घरपरिवारलाई त्यो पनि स’ह्य भएन। डेढ वर्षअघि छोरीलाई लिएर जनकपुर आई श्रीमान्सँग छुट्टै ब’स्न थालेकी हुँ।’ उनका बुवा सुबोधले तरकारी व्यापार गरेर छोराछोरीको पालनपोषण गर्दै आएका छन्।
सुबोधले नै छोरीलाई ससुरालीमा दिनरात हिं”सा सहनुपर्ने समस्यालाई हेर्दै बरु जनकपुरमै बसेर छुट्टै तरकारी बेचेर जीव’न चलाउन सुझाव दिए। आरती आफू र छोरीका लागि मेहनत गर्न थालिन्। तर, सञ्जीवले दुःख दिन छाडेनन्। त्यसकै परि’णाम भोगिरहेका छन् सञ्जीव। उनी पु”र्प”क्षका लागि जलेश्वर का”रा”गा”रमा छन्। @annapurnapost